I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Juliane
I-Studio ine-30m2 futhi iku-Rua Augusta, amabhulokhi amabili ukusuka e-Avenida Paulista kanye namabhulokhi amahlanu ukusuka "ku-Baixo Augusta". Izitolo ezinkulu, amabhange, amakhemisi, i-Starbucks, i-Subway, i-Habib's ne-McDonald's kanye nezindawo zokudlela eziphakathi kwama-500m. Ilungele abantu abangafika kwabangu-3, njengoba inombhede ophindwe kabili nombhede kasofa.
YiSitudiyo esinombhede, indlu yokugezela nekhishi. Kuyindawo ethokomele futhi eyimfihlo, enikeza isevisi yamahhala yokuwasha kanye ngesonto (ngaphandle kwempelasonto). Ngaphezu kokuba ne-air conditioning, indawo yokupaka kanye ne-concierge yamahora angu-24.
I-Studio ifakwe i-Wi-Fi, i-TV, isiqandisi, isitofu, ihhavini ye-microwave, umenzi wamasemishi, umenzi wekhofi, izinto zokusika, amapuleti, izibuko namapani. Siphinde sibe nelineni lokulala namathawula.
4.94 ·164 okushiwo abanye
4.94 · 164 okushiwo abanye
I-Avenida Paulista, i-Parque Trianon, i-Masp, i-Baixo Augusta, Iretshurenti, Indawo yokuphuzela utshwala namakhefi
Izivakashi zingangithinta ngengxoxo ye-Airbnb, ngokwesilinganiso ngiphendula ngaphansi kwamahora angu-2.
UJuliane Ungumbungazi ovelele